Nuri Sahin5सेप्टेम्बर मा, 1988 मा जन्म भएको थियो। टर्की वंश को यो प्रसिद्ध जर्मन फुटबल खेलाडी। आफ्नो क्यारियर समयमा उहाँले क्लबहरू धेरै परिवर्तन थियो छ र सबै सफलता मनाउन। हामी पनि यो छोटकरीमा कुरा गर्नुपर्छ।
Nuri Sahin पनि प्रारम्भिक फुटबल रुचि भए - त्यसपछि यो छ वर्षको थियो। उहाँले क्लब "Meinerzhagen" मा अनुभव हासिल गर्न थाले। उहाँले पाँच वर्ष बिताए - 2001 सम्म ,. त्यसपछि म डर्टमन्ड 2005 सम्म युवा टोली लागि प्ले जहाँ "बोरशिया", सारियो। तर, 2003 देखि यो आधार प्रशिक्षण र खेल गर्न ल्याउन सुरु भएको छ। कडाई बोल्ने, डर्टमन्ड, "डर्टमन्ड" - Nuri को मुख्य टोली छ। सम्म 2011, उहाँले क्लब प्रमुख खेलाडीहरू एक थिए।
तर, पनि Sahin को "बोरशिया" को लागि प्ले गर्दा एक समयमा, यो लिए, त्यसैले, भाडा को लागि कुरा गर्न। उदाहरणका लागि, "Feyenoord।" यो आदेश मा, लामो समय खेलाडी रहन थिएन - एक सिजन। र उहाँले 29 पटक क्षेत्र मा गए। खेल को यो रकम लागि उहाँले छ लक्ष्य डिजाइन। त्यसपछि, 2011 मा, त्यो मैड्रिड "रियल" सारियो। तर, यो अवधि छैन उहाँको लागि सम्पूर्ण सफल भएको थियो।3वर्ष को लागि Nuri क्षेत्र मात्र4पटक प्रविष्ट र एकल लक्ष्य स्कोर थिएन। Admittedly, त्यो Spaniards लागि विशेष कुरा खेल्न थिएन। जसमा उहाँले, अन्त मा, फिर्ता 2014 मा मौसम, "लिभरपूल" (7 खेल, 1 लक्ष्य) र मूल "बोरशिया", उहाँको भाडामा किनभने।
Nuri Sahin - क्लबहरू को पर्याप्त नम्बर परिवर्तन गर्ने खेलाडी। र आफ्नो हरेक कदम, उहाँले एक विवरण दिनुभयो। उदाहरणका लागि, मैड्रिड "रियल" जा, त्यो यो संसारमा सबै भन्दा राम्रो क्लब मध्ये एक छ कि, उहाँले आफ्नो खेलाडीहरू को भूमिका मा आफैलाई प्रयास गर्न चाहन्थे किनभने बताए। Nouri यो वास्तवमा एउटा ठूलो जम्प हो भन्नुभयो। र त्यो स्पेनी टोली प्रतिनिधिहरु इन्कार गर्न सकेन। तर निर्णय सजिलो थियो। "डर्टमन्ड" यो साँच्चै आफ्नो क्लब संग एक विकल्प बनाएको छ, किनभने धेरै चाहनुभएको लागि। करार पूर्ण-अवधि Nouri को 6.5 वर्ष प्ले मा अनुमानित थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद। को Spaniards उहाँलाई 12 लाख यूरो क्रम दिनुभयो हुनत।
टर्की खेलाडी भाडामा गर्ने "लिभरपूल", मा, Shahin एक औसत स्तर मा प्ले। पहिलो राउन्ड मा, त्यो विशेष केहि याद गर्नुहोस् थिएन, तर त्यसपछि "डबल" पद एफसी "पश्चिम Brom" जारी स्कोर गर्न थाले र पनि।
Nuri Sahin टर्की को राष्ट्रिय टोली पक्षमा पनि छ। मुख्य भाग को लागि, उहाँले 2005 मा आफ्नो debut गरे। यो जर्मन राष्ट्रिय टोली विरुद्ध खेल थियो। त्यसपछि Nuri एक शानदार लक्ष्य जारी Oliver Kahn। र त्यो 85th मिनेटमा क्षेत्र मा बाहिर गए र 87th मा गोल गरेका थिए।
मनोरंजक एक धेरै, तपाईं यस खेलाडी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। को प्रशंसक फुटबल त्यहाँ एक जोडीलाई छ भनेर थाह रुचि हुनेछ। Nuri Sahin र पत्नी Tugba अक्सर सँगै सार्वजनिक देखा।
मनपर्ने फुटबल मिसिन - "ओडी S5"। जवान यो उनले नजिकै छ सबै भन्दा राम्रो कार छ भनेर भन्छन्। खेलाडी इस्तानबुल, छुट्टी एण्टाल्या मा र "सिग्नल Iduna पार्क" र "सान्टियागो Bernabeu" मा प्रदर्शन गर्न प्रेम गर्नुहुन्छ। मनपर्ने रंग फुटबल - सेतो। सबैभन्दा-पढ्न पुस्तकहरू - "Ahimik" र सबै भन्दा revered अभिनेता - Denzel वाशिंगटन। Nuri रूपमा साँचो तुर्क, राष्ट्रिय संगीत प्रेम, तर पनि अनुसन्धान र बी सुन्नुहुन्छ आफ्नो परिवार र प्ले प्लेस्टेशन कन्सोल समय बिताउन छ - Shaheen सबै भन्दा राम्रो बाँकी उहाँलाई लागि बताए। र मुख्य सपना - च्याम्पियन्स मैड्रिड "रियल" संग लिग जीत। खैर, यो घटना को गान आफ्नो फोनमा रिङटोन रूपमा Nuri मा खडा।
Nuri Sahin - धेरै सफलता हासिल गरेको छ जो एक खेलाडी। त्यसैले, उदाहरणका लागि, "Feyenoord", उहाँले नेदरल्यान्ड को कप जित्यो। संग "बोरशिया" जर्मन च्याम्पियन भए र दुई पटक - देश (2013 र 2014) को सुपर कप। र मैड्रिड "रियल" संग - स्पेनका च्याम्पियन। व्यक्तिगत उपलब्धिहरू देखि हालसम्म एउटा मात्र कुरा हो - यो 2010/2011 मा छ जर्मनी मा च्याम्पियनशिप को सबै भन्दा राम्रो खेलाडी नाम थियो।
राष्ट्रिय टोलीमा Nuri कुनै फरक थियो। बस शुरुवात हो, र Nuri Sahin भविष्यमा धेरै हासिल गर्न सक्षम हुनेछ - तर, हामी माथि पुरस्कार भनेर मान्छु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उसलाई राम्रो भाग्य र लगनशील भई लागिरहेमा इच्छा रहन्छ।
MARKOS Pitstselli: ब्राजीलियाई-आर्मेनियाली footballers सबै मजा
MAREK Hamšík: को स्लोभाक राष्ट्रिय टीम को युवा कप्तान को जीवनी र क्यारियर
Le गहना Resort4* (Calabria, इटाली) फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
Zhyul भर्न। "रहस्यमय द्वीप" - धेरै पुस्ताका मनपर्ने पुस्तक
तपाईं प्रेम र विवाहमा अनुकूलता नाम कसरी थाह
त्यहाँ ग्रीवा क्षरण को कटरीकरण पछि अलग हुनुपर्छ?
छुरा भौं: मुख्य प्रकार, आवेदन, छनौट लागि सुझावहरू
शालीनता? भनेर हामी पास छैन!